traintips Archives | စာမျက်နှာ2၏5| တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ သငျသညျနှစျသိမျ့တွေ့ကြုံခံစားင့်ပြီးတာနဲ့, မီးရထားခရီးသွားလာ၏အဆင်ပြေစေရန်နှင့်အထွေထွေအံ့ဘွယ်သော, ဘဝတစ်ခက်ခဲပြန်လာ pre-ရထားလမ်းဖွင့်. ကျနော်တို့နွေရာသီအတွက်အကောင်းဆုံးဥရောပရထားလမ်းကြောင်းများအကြောင်းပြောနေတာပါတယ်အထူးသဖြင့်လာသောအခါ. သာယာလှပလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူထုပ်ပိုးတစ်ဦးကတိုက်ကြီး, အံ့သြဖွယ်ရှုခင်းများနှင့်မယုံနိုင်စရာနေရာများပိုလျှံ…
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ အားလုံးစွန့်စားမှု Junkies နှင့်ရှာဖွေသူ Calling! အကောင်းဆုံးတောင်တက်စမှတ်နှင့်မည်သည့်ရထားဖြင့်ထိုသို့ရောက်နိုင်သည်ကိုသင်သိလိုပါသလား? ထိုအခါသင်သည်လက်ျာအရပ်၌ရှိနေ! This article was written to educate about Train Travel and was made by Save…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဥရောပတိုက်တွင်သမိုင်းဝင်ဟိုတယ်များရှားပါးမျက်မှောက်မဟုတ်, အထူးသဖြင့်ကြွယ်ဝသမိုင်းနှင့်အတူကြီးမားသောမြို့ကြီးတွေမှာ. ပဲရစ်, လန်ဒန်, ရောမမြို့, မြူးနစ်, ဗီယင်နာ - ဤမြို့ကြီးများ၏အားလုံးကမ်းလှမ်းရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သောအရပ်တို့ကိုမရှိ. ရိုးရာဇိမ်ခံပစ္စည်းအချို့ကိုတောင့်တသောကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များသည်နေရာတစ်ခုရှာရန်မခက်ခဲပါ…
ရထားအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွား, ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ...
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ Disneyland ပဲရစ်မကြာခဏအများအပြားပရိတ်သတ်တွေသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အဘို့အပထမဦးဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒစ္စနေးပန်းခြံဖြစ်ပါသည်. သငျသညျဆောငျးရာသီနဲ့နွေရာသီကာလအတွင်းပဲရစ်မှာအကောင်းဆုံး Disneyland အားလပ်ရက်စီစဉ်ဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုခငျြပါနဲ့? ထိုအခါသင်သည်လက်ျာအရပ်မှလာပါတယ်! Marne-la-Vallee မှာတည်ရှိပါတယ်,asuburb of…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဘရစ္စဘိန်းကွင်းစ်လန်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ပြီးပင်လယ်ပြင်ကမ္ဘာ့ဖလားနဲ့တူ A-list ကိုဆွဲဆောင်မှုအားဖြင့်မင်္ဂလာရှိ, တောင်ပိုင်း Bank ၏ဒဏ်ငွေမြက်ခင်းပြင်များနှင့်ဥယျာဉ်, နှင့်ပုံပြင်တံတားအများအပြားကပို - သြစတြေးလျရဲ့အရှည်ဆုံး cantilever တံတား. ဒါဟာအစတစ်ဦးဖန်တီးမှုမြို့ရဲ့, with art museums and galleries and chic cafes…